Indlela Yokwenyani! UBukumkani bukaThixo Buyeza Kungekudala! TheTrueWay.xyz | Iinyaniso zeBhayibhile ezichaziweyo – Indlela eyiNyaniso – TheTrueWay.xyz & jw.org/xh
Indlela Yenyaniso! UBukumkani bukaThixo Buyeza Kungekudala! TheTrueWay.xyz
Indlela Yokwenyani! UBukumkani bukaThixo buza kufika kungekudala!
Ilizwi likaThixo nguhat abantu kufuneka bajonge. Sisibane esiqaqambileyo senyaniso esinokunceda abantu balulungelelanise unqulo lwabo kuSomandla.
Injongo yale ntlangano kukubuyela emva kangangoko kunokwenzeka kwiinkolelo zantlandlolo zabafundi bokuqala bakaKristu, kushenxiswe iimfundiso zobuxoki eziye zanyebelezela.IZenzo 9: 1-2). Ke ngoko, lo msebenzi ubizwa ngokuba yiNdlela eyiNyaniso.
Le webhsayithi yenzelwe ukuba abantu baziprintele amabali nemibandela bona okanye ubulungiseleli!
Inyaniso ayikukhathaleli ukubuzwa kodwa ubuxoki buyenza.
Kukho amadoda nemibutho emininzi efuna abantu bakhangele kubo, besithi baxhaswa nguThixo yaye benza imiqondiso yamandla. Kodwa abantu bakaThixo abayi kuqhathwa. Ilizwi lomntu likhokelela ekuphelelweni lithemba kuphela. UYeremiya 10: 23
Abathandi bakaThixo baya kusoloko bekhangele kwizigidimi zikaThixo ukuze bafumane isiqinisekiso nokhokelo. Le webhsayithi inceda abantu ukuba bahlole iinkolelo zabo baze balungise unqulo lwabo, ukuba kuyimfuneko, baze babe nolwalamano olulunge ngakumbi noSomandla. IZenzo 17: 11-12
Usenokuvakalelwa kukuba akuyomfuneko ukuba uhlole iinkolelo zakho. Yiloo nto kanye umchasi omkhulu USomandla ufuna ukuba ucinge. Ufuna abantu balandele ilizwi lomntu kunelikaThixo. Ukuzithemba kunokuba yingozi.
Ngamana singafunyanwa silungisa unqulo lwethu, ngomhla wokuhlolwa!
Ndwendwela iqela likaFacebook
© 2022 Indlela eyiNyaniso! UBukumkani bukaThixo Buyeza Kungekudala! TheTrueWay.xyz